Dowladda Somaliya Oo Deeq Raashin ah Gaarsiiyay Degmada Diinsoor. – Heemaal News Network
Gudoomiyaha Degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow iyo qaar ka mid ah qoysaska danyarta Deegaanka ayaa uga mahadceliyay Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Wasiirka, deeqdan raashinka ah oo ay sheegeen inay kusoo aaday xilli aad loogu baahnaa.
Dhinaca kale Wasiirka Xanaanada Xoolaha Soomaaliya mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa kulan la qaatay saraakiisha AMISOM iyo Ciidamada Daraawiishta Koonfur galbeed kuwaas oo dowaladda Soomaaliya ka codsaday in la qarameeyo oo ay xuquuq yeeshaan, Wasiirka ayaana dhankiisa ciidamada ku booriyay dadaallada nafhurnimada leh oo ay ku difaacayaan dadka shacabka ah.
Ugu dambeyn Wasiirka Xanaanada Xoolaha Soomaaliya ayaa aragtidooda iyo baahiyaha jira ka wareystay odayaasha iyo waxgaradka Degmada Diinsoor, wuxuuna u ballanqaaday inuu baahiyahooda u gudbin doono Madaxda sare ee dalka.
CXDS Oo Soo Afjaray Weerarkii Lagu Qaaday Huteel Afrik